iPhone Haizodzime Mapikicha? Heino Kugadzirisa. [Nhanho-nhanho Nhungamiro] - Iphone
vhara nhamba yefoni iphone
iphone inoti hapana sim kadhi
foni yangu inongoerekana yadzimwa
handisi kuwana yangu iphone pane itunes
iPhone Haizodzime Mapikicha? Heino Kugadzirisa.
Iwe urikumhanya pasi pane iPhone yekuchengetedza nzvimbo uye unoda kudzima mimwe mifananidzo. Asi zvisinei nezvaunoita, haugone kuratidzika sekuti unodzima mapikicha eApple. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura zvekuita kana yako iPhone isingadzime mapikicha !
Nei Ndisingakwanise Kudzima Mapikicha Pane yangu iPhone?
Kazhinji yenguva, haugone kudzima mapikicha pane yako iPhone nekuti akawiriraniswa kune chimwe chishandiso. Kana ako mapikicha akawiriraniswa kune komputa yako neTunes kana Tsvaga, anogona kungodzimwa kana uchibatanidza yako iPhone kune yako komputa.
Kana iyi isiri iyo kesi, saka iCloud Mifananidzo inogona kuvhurwa. Ini ndichatsanangura maitiro ekugadzirisa zvese izvi zviitiko pamwe nechinogona kuve software dambudziko.
Kuenzanisa Yako iPhone Kune iTunes Kana Tsvaga
Kutanga nekubatanidza yako iPhone kune komputa yako netambo yeMheni. Kana iwe uine PC kana Mac inomhanya macOS Mojave 10.14 kana kupfuura, vhura iTunes uye tinya pane icon ye iPhone padyo nekona yekumusoro-kuruboshwe kona yekushandisa.
Kana iwe uine Mac inomhanya macOS Catalina 10.15 kana nyowani, vhura Tsvaga uye tinya pane yako iPhone pasi Nzvimbo .
Tevere, tinya Mifananidzo . Isu tinokurudzira chete kuyananisa mafoto kubva Akasarudzwa maAlbhamu kuita kuti izvi zvive nyore. Tsvaga iwo mapikicha iwe aunoda kubvisa kubva kune yako iPhone uye usasarudze iwo. Zvadaro, sync iPhone wako zvakare kupedza muitiro.
Dzima iCloud Mifananidzo
Kana yako iPhone ikasadzima mapikicha uye asina kuwiriraniswa kune chimwe chishandiso, tarisa kana iCloud Mifananidzo inogoneswa. Vhura Zvirongwa uye tora pazita rako kumusoro kwechiso. Wobva wadzvanya iCloud .
Kubva pano, tapira Mifananidzo uye ita shuwa kuti toggle padhuze ne iCloud Mifananidzo yakadzimwa. Iwe uchaziva kuti chimiro chinodzimwa zvizere kana switch iri chena panzvimbo yegirini.
Kana kana mamwe matanho ari pamusoro akagadzirisa dambudziko, yako iPhone inogona kunge iri chiitiko che software. Kugadzirisa kwekutanga kwatinokurudzira kutangazve yako iPhone.
Maitiro Ekutangazve Yako iPhone
Pane iPhones ine Chiso ID : Dhinda uye ubatise bhatani repadivi uye kana bhatani bhatani kusvika slide kumagetsi kudzima rinoratidzika. Shandura icon yemagetsi kuruboshwe kurudyi. Mushure memasekondi mashoma, pinda uye bata bhatani repadivi kubatidza yako iPhone zvakare.
Pane iPhone isina Chiso ID : Dhinda uye ubatise bhatani remagetsi kusvika slide kumagetsi kudzima inowanikwa pachiratidziri. Rova zvakasimba simba kuvake kubva kuruboshwe kurudyi kuvhara iPhone wako. Mira masekonzi mashoma, wobva wadzvanya wobata bhatani remagetsi zvakare kuti udzorere rako iPhone.
Kuisa yazvino iOS yekugadzirisa kunogona kugadzirisa dambudziko kana yako iPhone isinga bvise mapikicha. Apple inowanzoburitsa zvidzoreso zveIOS kugadzirisa bugs, kuunza marongero matsva uye maficha, uye kubatsira zvinhu kuti zvifambe mushe pa iPhone yako.
Kuti utarise kana paine chigadziriso chiripo, tanga nekuvhura Zvirongwa . Tevere, tinya General -> Software Kwidziridza . Tinya Dhawunirodha & Isa kana iOS yekuvandudza iripo.
iPhone Kuchengeta Mazano
Unogona kusunungura imwe nzvimbo yekuchengetera muZvirongwa. Vhura Zvirongwa uye tapira General -> iPhone Kuchengetedza . Apple inopa kurudziro yakati wandei yekusunungura nzvimbo yekuchengetera, kusanganisira kubvisa zvachose Ichangobviswa mifananidzo.
Iyi ndeimwe yemazano atinoita muvhidhiyo yedu ekugadzirisa iPhone yako. Tarisa uone kuti udzidze mamwe mapfumbamwe mamwe matipi senge ino!
iPhone Haizodzime Mapikicha? Kwete Zvekare!
Iwe wakagadzirisa dambudziko uye unogona ikozvino kudzima mapikicha pane yako iPhone. Ita shuwa yekugovana ichi chinyorwa kudzidzisa yako mhuri uye shamwari zvekuita kana yavo iPhone isingadzime mapikicha.
Une mimwe mibvunzo here? Vasiye ivo muchikamu chemashoko pazasi!